China Yakarukwa bhandi Vagadziri, Yakasarudzika Yakarukwa bhandi Quotation - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Webbing>Rakarukwa bhandi
Plain dzakarukwa elastic bhandi
Yakarukwa bhanhire rakarukwa rakarukwa nenzira yekuruka uye weft lining nzira.Pasi pechiito chekukochekera tsono kana rurimi tsono, iyo warp inogadzirirwa kuita cheni yekuruka, uye weft yakasungirirwa pakati pemaketani ekuruka kuti ubatanidze akapararira maketani ekuruka mubhandi .
Bhatani rakarukwa rakasungwa bhandi
(1). Saizi yemufananidzo: 2.5cm, upamhi inogona zvakare kunge 0.3cm ~ 10CM, kana iwe uine chero zvaunoda, ndapota taura nesu kuburikidza EMAIL.
(2). Izvo zvigadzirwa zviri pamusoro zvirimo, kana iwe uchida mhando yemhando isu tinokupa iwe mahara, unoda kugadzirisa hunhu chaihwo ndapota bvunza vatengi usati waisa odha! Spot tsananguro yemhando general kugadzirwa kutenderera ndeye 3 ~ 5 mazuva, iyo nhamba yezvakawanda anopfuura zviuru makumi mashanu emamita anoda mazuva manomwe kusvika gumi neshanu, yakasarudzika mhando mhando (yakafara) mhando ndeimwe hurukuro! Dhata dzinogona kunge dziri EMAIL kubvunzana uye kutaurirana, isu tichaenderana nemhando yezvido zvako kune ruzivo rwehunyanzvi kuti utsanangure wozoisa kugadzirwa kwekuongorora. .....
(1) Saizi yemufananidzo: 4.0cm, upamhi inogona zvakare kunge 0.3cm ~ 10CM, kana uine zvaunoda, ndapota taura nesu kuburikidza EMAIL.
(2) izvo zvigadzirwa zviri pamusoro zviripo, kana iwe uchida mhando sampuro isu tinokupa iwe mahara, unoda kugadzirisa hunhu hwakakosha ndapota ubvunze vatengi usati waisa odha! Spot tsananguro yemhando general kugadzirwa kutenderera ndeye 3 ~ 5 mazuva, iyo nhamba inopfuura zviuru makumi mashanu emamita inoda 7 ~ 15 mazuva, yakasarudzika mhando mhando (yakafara) mhando ndeimwe hurukuro! Dhata dzinogona kunge dziri EMAIL kubvunzana uye kutaurirana, isu tichaenderana nemhando yezvido zvako kune yako nyanzvi ruzivo kuti utsanangure wozoisa mukugadzira proofing .....